Ukwazi Ulimi lwabafundi besiNgisi
Izinga lesifundazwe lalesi sikole lalinqunywa kanjani?
Isikole ngasinye sithola amamaki azo zonke izinkomba ezisebenzayo. Izikolo kulezi zinkomba zinesisindo ukukhiqiza ibanga lokugcina le-AF, ngokuya ngesilinganiselo sika-0-100. (Umthombo wedatha: unyaka wesikole we-2018-2019) Funda kabanzi
Ibanga ngokuqhubeka kwesikhathi
Lesi sikhombisi silinganisa ukusebenza kahle kwamazinga amabanga ebanga ku-English / uLimi lwezobuciko kanye neMathematics esikoleni.
Lesi sikhombisi silinganisa ukukhula komfundi ngokuya ekufundeni esikoleni. Umfundi ngamunye uhola amaphuzu ngokususelwa kuhlobo lokukhula olukhonjisiwe (ukukhula okuncane, ukukhula okujwayelekile, ukukhula okuphezulu). Amaphuzu abelwa kusetshenziswa ukukhula kukhula etafuleni lobuciko. Izikole zingadlula amaphuzu ayi-100 kule metric.
Ukuthweswa iziqu kanye nekolishi nokulungela umsebenzi
Lesi sikhombisi silinganisa ukuphothulwa kwabafundi kwezidingo zokuphothulwa kwe-Indiana kungakapheli iminyaka emine neminyaka emihlanu esikoleni, kanye nokufakazelwa kwesitshudeni okubonisa ukulungela izikhala.